တောင်သမန်သားလေး: May 2017
Posted by lin linn at 3:38 AM
Android နဲ့ အလန်းစား Video တွေဖန်တီးနိုင်မယ့် VivaVideo 5.7.5
Download VivaVideo Pro v5.7.5.apk : 36.14 Mb
Maung Pauk at 9:00:00 PM Android Application, Android Social, Facebook, Phone Application,
May 28 ရက်နေ့က ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Facebook ဗားရှင်းသစ် 126.0.0.18.77 ဖြစ်ပါတယ်.. Beta Version ဖြစ်ပြီး UI နဲ့ Function တွေ သိပ်အပြောင်းအလဲလုပ်ထားတာကို မတွေ့ရပေမယ့် ပိုမိုသွက်လက်လာပါတယ်...
Download Facebook 126.0.0.18.77.apk : 73 Mb
မင်္ဂလာပါ ပြည်ပရောက် ချစ်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့Myanmar Exchange Rates ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးပါ။ မိမိတို့ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှ အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလဲချင်တဲ့အခါငွေဈေးနှုန်းကိုသိချင်လို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေဆီသို့ ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးစရာမလိုပဲ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို ဖုန်းမှာဆောင်ထားခြင်းဖြင့် အင်တာ နက်ဖွင့်ပြီးနောက်ဆုံးပေါက်ဈေးကမ္ဘာငွေကြေးနှုန်းထား များစာရင်းကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဆော့ဖ်ဝဲ လေးကမေလ၆ ရက်နေ့မှာစပြီးဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိထား တာမို့အသုံးပြုရတာအရမ်းကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ Android/Tablet 5.0 အထက်ရှိဖုန်း များမှာထည့်သွင်း Install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အသုံးပြုဖို့ ဒေါင်းလော့ရယူပါ။
Android ဖုန်းမှ Microsoft Excel, Word, Powerpoint များတွင်​ မြန်​မာစာထည့်​သွင်းနည်း (100% Tested)
Android ဖုန်းမှ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint စတဲ့ Microsoft Application တွေမှာ မြန်မာစာအဆင်မပြေဘူးဟုဆိုကာ တော်တော်များများ မေးထားကြလို့ လူတိုင်းအလွယ်ကူဆုံး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ..။
လိုအပ်တာတွေဒေါင်းယူ Install လုပ်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း တဆင့်ချင်း လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ...။
(အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် အောက်နားက Video လေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်)
Some APK (Extract & Install All App)
အထက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း Microsoft Excel နဲ့ M icrosoft Word တို့မှာလည်းထည့်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
အားလုံးပြီးရင် Phone Setting > App Manager မှတဆင့် Powerpoint ကို "Force Stop" လုပ်ပေးပါ..။
Microsoft Powerpoint App ကို ဖွင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
How To Install Custom Font On
Microsoft Excel, Word, Powerpont APK
1) Your Device Must be Rooted.
2) Any Font.ttf.
3) Install Some APP (Download Link)
4) Follow My Video.